तनाव कम गर्न
अहिलेकाे समयमा जाे पनि निकै व्यस्त हुन्छ । अनि प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले गर्दा तनाव बढ्न सक्छ मानिसमा । तर तनाव कम गरेर कसरी स्वास्ठ भएर बस्ने त ? केही उपाय :
कस्तो अवस्था र व्यवहारले तनाव ल्याउँछ र तनावका वेला तपाईं कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ ? यो बुझ्न जरुरी छ । निरन्तर अभ्यास गरेर तनावको प्रभाव आफूमा कम गर्न सकिन्छ । के कारणले तनाव भइरहेको हो भन्ने कुरा केलाएर त्यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।